हरेकको फिङ्गर प्रिन्ट किन हुन्छ अलग-अलग ? « Nagarik Khabar
हरेकको फिङ्गर प्रिन्ट किन हुन्छ अलग-अलग ?
प्रकाशित मिति : 8 January, 2022 7:46 pm
एजेन्सी । हरेक मानिसको हातको छालाका दुई तह मिलेर बनेको हुन्छ । पहिलो तहएपिडमिस हो भने अर्को डर्मिस हो । दुबै तहको एकैसाथ वृद्धि भइरहेको हुन्छ । यिनै दुबै तहहरु मिलेर हाम्रो हातको छालामा फिङ्गर प्रिन्ट तयार हुन्छ । के तपाईंलाई थाहा छ, फिङ्गर प्रिन्ट एक पासवर्ड जत्तिकै हुन्छ ।
हाम्रो स्मार्टफोन आजभोलि फिङ्गर प्रिन्टले खुल्ने गरी बनाईएको हुन्छ । हाम्रो हाजिरी पनि आजभोलि फिङ्गर प्रिन्टबाट गर्ने गरिएको छ । तपाईंको हात जल्दा वा एसिडले छाला बिग्रिँदा पनि फिङ्गर प्रिन्ट बदलिदैन । यहाँसम्म कि हातमा कुनै घाउ भए पनि हातको फिङ्गर प्रिन्ट बदलिदैन ।
संसारभरका मानिसहरुको एकअर्काको फिङ्गर प्रिन्ट कसैसँग पनि मिल्दैन, छैन त अचम्म ? यतिसम्म कि एकपटक मानिसको फिङ्गर प्रिन्ट बनेपछि उसको फिङ्गर प्रिन्ट जीवनभर बदलिदैन ।
यसरी एकअर्कामा फिङ्गर प्रिन्ट नमिल्नुको कारण जन्मजात नै रहेको छ । मानिसको जीन्स, इन्भाइरोन्मेन्ट जस्ता कुराहरु जिम्मेवार हुने बताइएको छ । विज्ञका अनुसार बच्चा जब गर्भमा हुन्छ सोही समयमा उसको फिङ्गर प्रिन्ट तयार हुन थाल्छ । उमेर बढ्दै गएपनि उसको फिङ्गर प्रिन्टमा कुनै बदलाव देखिँदैन ।
कसरी हुने स्लिम र फिट ? यस्तो छ सरल तरिका
तौल कम गरेर आकर्षक र छरितो देखिन निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन सकिन्छ । तौल धेरै
महंगाे काजुकाे यस्ताे फाइदा
काजुको सामान्य जीवनमा केही महंगो भएका कारण कमैले मात्रै प्रयोग गर्छन् । तर काजुको नियमित
कफी पिउँदा रोग हैन, मुटु जोगाउँछ : अध्ययन
न्युयोर्क । कफी पिउँदा मुटु रोग लाग्नुको सट्टा जोगाउन सकिने एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।